Dardaaranka Caafimaadka | LawHelp Minnesota
Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org
Amarkii hakinta guri ka saaritaanka ee Minnesota waa uu dhamaaday waqtigiisii. Wax badan halkan ka ogow.
Health Care Directives (PDF)492.57 KB
Form: MN Health Care Directive (PDF)713.05 KB
Waa maxay Dardaaranka Caafimaadka?
Dardaaranka Caafimaadka waxa uu kuu ogolaanaya in aad ka tagto dardaaran caafimaad oo aad magacowdo “Wakiilkaaga Caafimaadka.” Wakiilka Caafimaadka waa qofka aad u dooratay in uu kuu gaaro go’aanada la xiriira caafimaadka marka ay dhakhtarkaaga u cadaato in aadan go’aan isu gaari karin.
Waxa aad magacaabi kartaa qof wakiil ah adiga oo aan uga tagin wax talo siin ah AMA waxa aad uga tagi kartaa dardaaran aad ku fareyso waxa uu yeelayo haddii aadan go’aan isu gaari karin. Adiga ayaa dooranaya.
Waxaa jira Foomka Dardaaranka Caafimaadka oo halkan ku lifaaqan.
Ama, sameyn kartaa DardaarankaCaafimaad barta internetka ee: www.lawhelpmn.org/forms.
Waxa aad raadisaa “Dardaaranka Caafimaadka Iyo Awooda Sharciga Ah”
Guji “Dardaaranka Caafimaadka (Health Care Directive)”
Tani waa wareysi talaabo talaabo ah oo kuu ogolaanaya in aad daabacdo foomka oo dhan marka aad buuxiso.
Waa maxay waxyaabaha ay waajibka tahay in ay ka mid noqdaan Dardaaranka Caafimaadka?
Waa inuu noqdaa mid qoraal ah.
Waa in ay taariikhda ku qoran tahay laguna cadeeyaa magacaaga.
Waa in lagu hor saxiixaa nootaayada AMA ay laba qof goobjoog ka noqdaan . Qofka wakiilka kuu ah ama lagu bedelayo wakiilka ma noqon karo goobjooge ama nootaayada.
Waa in lagu magacaabaa qof go’aan kuu gaara (wakiilka dardaaranka caafimaadka) ama aad siisaa tilmaamaha caafimaadka ee uu raacayo.
Yaa noqon kara wakiilka caafimaadka?
Qof aad wakiilka ka dhiganeyso waa in ay da’diidu ka weyn tahay 18 sano. Dooro qof aad si wanaagsan u garaneyso oo raacaya sida aad ka dardaaranato, dantaada u taagan oo dhakhtarkaagu heli karo markii uu doodno. Qof kasta ayaa kuu noqon kara wakiil marka laga reebo dhakhtarkaaga ama shaqaalaha caafimaadka ee daryeelka kuu fidinaya, haddii uusan qaraabo kuula aheyn kula dhashay, xiriir guur idinka dhaxeeyo, isu dhaxdaan ama aad korsatay.
Waxa kale oo aad ku sheegi kartaa dardaaranka caaafimaadka sababta aad u dooratay qofkaas.
Waa muhim in aad kala hadasho qofka aad ka dhiganeyso wakiilka haddii ay doonayaan in ay caafimaadkaaga go’aan kaaga gaaraan marka ay muhim noqoto sidaas. Waxaa kale oo lagaa doonayaa in aan gudbiso waxyaabaha aad dooneyso in laga yeelo caafimaadkaaga.
Wax ka badan hal qof ma u wakiilan karaa caafimaadkeyga?
Waxa aad magacaabi kartaa hal qof ama ka badan ama qof bedeli kara wakiilka. Haddii aad sidaas yeesho, waxa aad ku cadeyn kartaa haddii ay waajib tahay in kuligeen go'aanka wada gaaraan ama go’aanka u gaaraan si keli keli ah.
Waa Maxay Awoodda Uu Leeyahay Qofka Aan Wakiilka Uga Dhiganayo Daryeelka Caafimaadka?
Haddii aadan adigu xadidin awoodda wakiilka, waxa uu wakiilku:
Ogolaan karaa, diidi karaa ama joojin karaa dhamaan waxyaabaha la xiriira daawada iyo daaweynta. Taas waxaa ka mid ah daaweynta la xiriirta cudurada dhimirka.
Joojin karaa ama hor istaagi karaa in lagugu xiro qalabka dadka nolosha ku haya.
Kuu doori karaa dhakhtarkaaga.
Kuu doori karaa halka lagugu daaweynayo.
Go’aan ka gaari kara in lagugu daaweeyo meel ku dhow guriga, ama guryaha dadka naf ka dhawrka ah, ama guryaha leh kalkaaliyayaasha caafimaadka.
Eego diiwaanada caafimaadka iyo xuquuq la mid ah midda aad u leedahay in aad dadka kale u ogolaato in ay arkaan diiwaanada caafimaadka.
Ku soo booqdo marka lagu dhigo goob caafimaad.
Haddii aad dooneyso in aad xadiddo qaarka mid ah awoodahaas, waa in aad ku cadeysaa dardaaranka.
Ma Jiraan Waxyaabo Kale Oo Aan U Ogolaan Karo Wakiilkeyga?
Haa. Waxa aad u ogolaan karta wakiilkaag waxyaabo kale haddii aad ku cadeyso Dardaaranka Caafimaadka.
Inuu go’aan ka gaari karo haddii aad dooneyso in aad bixiso qaarka mid ah xubanaha jirkaaga sida xubnaha, dheecaanka iyo indhaha marka aad geeriyooto.
Tilmaan sida aad dooneyso in laga yeelo jirkaaga ka dib marka aad geeriyooto (in lagubo, aaso).
Waxa kale oo aad wakiilkaaga u ogolaan kartaa in uu go’aan ka gaaro caafimaadkaaga haddii aad xitaa weli go’aan isu gaari karto (miyir qabto).
Goorma Ayaa Wakiilka Dardaaranka Caafimaadku Bilaabayaa Inuu Go’aan Ii Gaaro?
Wakiilku waxa uu bilaabayaa inuu go’aan kuu gaaro marka:
Dakhtaraakgu uu caddeeyo in adan go’aan isu gaari karin.
Marka Dardaraanka Caafimaadka ku cadahay marka uu bilaabayo.
Waa maxay shaqada Wakiilka Dardaaranka Caafimaadka?
Wakiilka caafimaadka waxa uu go’aanka u gaarayaa sidii aad aadigu u gaari laheyd. Waa ay xaqiijiyaan in la raacay Dardaaranka Caafimaadka oo ay sharciga la tiigsadaan haddii aan la raacin.
Ma ka noqon karaa Dardaaranka Caafimaadka?
Haa. Waad ka noqon kartaa isaga oo dhan ama qeyb ahaan Dardaaranka adiga oo:
Jeexjeexa qoraalka asliga ah.
Qof kale in aad farto inuu jeexjeexo, oo ay ka mid yihiin nuqulka laga sameeyey.
In aad soo saarto qoraal aad ku qorto taariikhda oo aad ku cadeyso in aad dooneyso in aad ka noqoto Dardaaranka oo dhan ama qeyb ka mid ah. Haddii aad ka noqoneyso qeyb ka mid ah, caddee qeybta Dardaaranka ah oo aad dooneyso in aad ka noqoto.
In aad afka ka sheegto adiga oo laba qof oo goobjoog ah wargelinaya in aad dooneyso in aad ka noqoto. Ma aha in ay isku mar ka dhigaan.
Waxa aad qori kartaa Dardaaran Caafimaad.
Xagee ayaan ku heynayaa Dardaaranka Caafimaadka?
Meel la dhig aqoonsiyadaada kale ee muhimka ah oo dadka kale ay ka heli karaan, ha ku xirin sanduuq xiran. Sii nuqul aad saxiixday dhakhaatiirta, qoyska, saxiibada kuu dhow, cidda aad wakiilka ka dhiganeyso, iyo qofka bedelaya wakiilka haddii loo baahdo. Codso in lagu daro diiwankaaga caafimaadka ee dhakhtarka iyo cisbitaalka, hay’adaha daryeelka, guryaha dadka naf ka dhawrka ah lagu hayo, ama guryaha dadka wayeelka ah.
“Dardaaranka caadiga ah” ee aan qoro ama “wakiilashada caafimaadku” ma yihiin kuwo shaqeynaya?
Waa laga yaabaa. Waa kuwo dhaqangal ah haddii:
Ay dhan yihiin dhamaan qodobada laga doonayo Dardaaranka Caafimaadka (kor ku xusan)
Lagu saxiixay gobol kale oo ay waafaqsan yihiin sharciyada u degsan gobolkaas.
Waxa aad isticmaali kartaa foomka ku xusan xogta urursan ee boggan ugu dambeysa. Labada bog ee ugu dambeeya waa xogta urursan. Waajib kuguma aha in aad raacdo foomka sida loo qoray, laakiin waxa ay kaa caawineysaa in aad go’aan ka gaarto waxyaabaha aad ku dari karto.
You can use the form attached to this fact sheet. The last 2 pages are a Health Care Directive worksheet. You do not have to do the worksheet part, but it can help you decide about health care needs and can be added to the rest of your form if you want.